safarka ugu horeeya Archives - 1aviagem.com
Tag: safarka koowaad
Sideen ugu guuleysan karnaa dagaalkii saddexaad ee dunida? Jawaabta ayaa laga yaabaa inay adiga kugu jirto.
Sida loogu guuleysto Dagaalkii Adduunka III oo ay la socdaan dalxiisayaal fara badan?
Leia mais Sideen ugu guuleysan karnaa dagaalkii saddexaad ee dunida? Jawaabta ayaa laga yaabaa inay adiga kugu jirto.
Waxa laga sameeyo Riga Magaalada oo mideysa naqshadda dhismaha cusub iyo kuwii hore - Latvia
Hagaag, ka hor intaanan ka hadlin Riga lafteeda, maxaa halkaas ugu soo dhammaaday? Rabitaanka rabitaanka ah inaan booqdo dhammaan waddamada adduunka, ama ugu yaraan intooda badan, Latvia waxay ku jirtay badhtamaha waddada dhexdeeda, badhtamaha waddadana waxay ahayd Latvia. Inta u dhaxaysa Estonia iyo Lithuania.😎 Aniga oo la yaab leh marinka…
Leia mais Waxa laga sameeyo Riga Magaalada oo mideysa naqshadda dhismaha cusub iyo kuwii hore - Latvia
Talooyin ku saabsan Berlin - Jarmalka - Muuqaal 10
Ku soo dhawoow qof walba, haddaba waxan ka hadalnaa maanta Belarus. Si arrintan loo sameeyo, ma jirto wax ka wanaagsan intii wareysiga muwaadiniinta Belarusiyiinta ah. Taasna waa markii aan wareysigan la yeeshay saaxiibkey qaaliga ah ee Kate. Waanu la kulannay markii aan safar ugu horeysay u imid. Waxay booqatay Minsk oo ahayd hagaha degaanka ...
Leia mais Belarus muwaadin u dhashay Belarus
Kanada - sidee ku noqon kartaa Niagara Falls?
Maanta waxaan booqan doonaa Niagara Falls. Ka tagista Toronto waxaad si fudud u gaari kartaa Niagara Falls adoo tareen leh. Waxay qiyaastii labo saacadood ka socotaa Via Rail. qiimaha $ 24,86 CAN (Dollar Canadian Dollar). In fasalka dhaqaalaha kaas oo aad u wanaagsan oo jidka. Tareenka ayaa leh jiko, wifi, musqulo iyo ...
Leia mais Kanada - sidee ku noqon kartaa Niagara Falls?
Safarka hore ee Maraykanka - New York.
Sidaa darteed, sidee ayaan uga hadli karnaa Mareykanka maanta? dalka aad ka soo baxay shabakadaha bulshada waaweyn sida facebook, Instagram, twitter iyo iyada oo loo marayo dambe ay madaxweynaha haatan sidoo kale ka dhigaysa statements muran! Laakiin waxaa haboon in la xusuusto in waddanku uu sidoo kale lahaa dhowr jibbaar dagaal ka dhan ah cunsuriyadda, sida Martin Luther King ...
Leia mais Safarka hore ee Maraykanka - New York.
Peru aragtida Peruvian iyo aragtida dalxiis
Waxay ku qanacsan tahay in aan ku soo daabacayo boostadan. Waxaan u maleynayaa inay tahay boostada ugu fiican ee blogkan ilaa hadda. Halis ah! Markii ugu horeysay, 1aviagem.com, waxaan heleynaa aragtida aragtida waddan ka muuqata aragtida hooyo, iyo sidoo kale dhinaca aragtida dalxiis. Si loo fududeeyo qof kasta oo aqriya inuu ogaado cidda hadlaysa ...
Leia mais Peru aragtida Peruvian iyo aragtida dalxiis
Magaca dartiis 1aviagem?
Waa hagaag, magacan waa la aqbalay markii aan bilaabay kanal on youtube ah. Waxay ahayd lagama maarmaan in la helo magac gaar ah. Kanaalka (iyo hadda blogka) ayaa ka hadli doona safarka. Marar badan kuma soo celiyo safarka, waxaan u sameeya markasta oo macquul ah dalal cusub ama meelo cusub. Sidaas darteed, haddii aad bedesho meesha aad ku socotid oo aad u safartid meel kale, ...
Leia mais Magaca dartiis 1aviagem?
Sidee kudhaca Koobka Ruushka adoo isticmaalaya Tareenka Moosko?
Maanta waa maalinta finalka Koobka Aduunka ee Russia (2018), kooxo badan ayaa horeyba ugu soo laabtay gurigooda. Malaha ugu badnaantii wuxuu ahaa baska garoonka. Laakiin dalxiiska, si kastaba ha ahaatee, ilaa ay mudantahay dhulka hoostiisa oo ay ka dhigi mid kortaan ka badan yahay ka hor inta aan macsalaameeyo caasimada Moscow ...
Leia mais Sidee kudhaca Koobka Ruushka adoo isticmaalaya Tareenka Moosko?
Brazil, talooyin ku saabsan Rio de Janeiro
Iyadoo la tixgelinayo soo laabashada kooxda reer Brazil, sida loo ogaado in yar oo Brazil ah Maanta waannu og nahay magaalada cajiib ah, caasimada hore ee Brazil ee dalka Tom la layahay, Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Toquinho (tani waa Paulista!, Mahad akhristaha caawimo, Renato RRSP'ga) iyo kuwo kale oo badan,. Meel Michael Jackson, James ...
Leia mais Brazil, talooyin ku saabsan Rio de Janeiro
Maxaa ku saabsan Colombia, maxaan ku tirin karnaa?
Oo sidee safarkayagii ugu horreeyay ku yimid Colombia? Waxaan kugu aamineynaa talooyin, raadin iyo taariikh! Waxaan u tagnay Cartagena si aan wax uga ogaano wax yar oo dalka ku saabsan. La soco wixii kusoo kordha. Maxay sixir bararku? Ciudad Amurallada (Walled City ama Walled City) iyo xarunta taariikhiga ah - Waxaan kugula talinayaa sameynta dib u dhiska wadooyinka waa ciriiri, iyagoo…
Leia mais Maxaa ku saabsan Colombia, maxaan ku tirin karnaa?
JOOJINTA Maxay tahay iyo sidee? Haa, waad kaydin kartaa lacag.
Dhammaantiin waad salaaman tihiin, tani waa inay noqotaa qoraal deg deg ah. Dhexdeeda waxaan kawada hadli doonaa STOPOVER! (Waa maxay taasi?) Joojiye, ma aha wax ka badan xiriir ka dhexeeya duulimaadyada dhaadheer, u beddelashada carruurta waa kiiska ay suurtagal tahay in la joojiyo iyada oo la ogaado goobta isla markaana lagu sii socdo isla duulimaadkii. Waxay ka timid Ingiriis: “Jooji”…
Leia mais JOOJINTA Maxay tahay iyo sidee? Haa, waad kaydin kartaa lacag.
Singapore - ku saabsan bandhigyada iyo Marina Bay Sands
Anigoon bilaabi kari kari kari waayo adiga oo aan kuugu mahad celin kuwaas oo aad jeclayd fiidiyowga oo aad ku biirtay kanaalka Youtube 1aviagem, oo waxaas oo kale u bixiyay. Waa waqtigii aad Singapore ama Singapore ugu keeni lahayd goobta. Sidaa darteed waxaan u mahadcelinayaa dhammaantiin taageeray mashruucan tan iyo kan ...
Leia mais Singapore - ku saabsan bandhigyada iyo Marina Bay Sands
Talada Ruushka Ruushka.
Dadka wanaagsan adiga oo aadaya Russia, St. Petersburg, Moscow, Novgorod, iwm. Talada waa inay ku raaxaystaan ​​Fadaraalka halkaas. Ogsoonow in “farsamada” Ruushku ay leeyihiin Fabergé Eggs, Matroskas, iyo kuwa kale oo badan. Oo waa maxay enchants yihiin faahfaahinta! Fiidiyowga hoosta ku yaal, waxaan haynaa kubad la mid ah 'Fabergé Egg'…
Leia mais Talada Ruushka Ruushka.
Dharka Parachute Jump Waa maxay?
Parachute boodi, waa sidee? Kahor intaadan sheegin, waxaan weydiinayaa: Weligaa miyaad dooneysay inaad u duulato sida gorgorka? mise shimbir kale? Weligaa miyaad dareentay "masayr" kuwaan duuli kara? Haddii jawaabtu ay tahay mid ku habboon mid ka mid ah su'aalahan markaa khibraddaas adiga ayaa leh. Waa hagaag, maxaa wiilka parachute u…?
Leia mais Dharka Parachute Jump Waa maxay?
Kamboodiya: Talooyin, Dhismo, Sheekooyin iyo Qiyam
Kadibna waxay ahayd waqtigii lagu booqan lahaa Cambodia, waddan fudud, waxtar leh, oo aad u saaxiibtinimo leh. Laga bilaabo bilowgii waddanku wuxuu mar hore iigu guuleystay naqshadeynta iyo waxtarka! Maxay tahay? Laakiin Cambodia ma ahan mid sabool ah oo aan horumar lahayn? Ii raac oo arag haddii dhamaadka aad wali aragto aragti isku mid ah. Talooyin: Innovation: Cambodia, ...
Leia mais Kamboodiya: Talooyin, Dhismo, Sheekooyin iyo Qiyam
Maxay tahay inaan ogaado ka hor intaanan u safrin Ruushka? (Talooyin)
Si aad u samayso safar xasilloon in Russia maanka ku hayo: Haddii aad tahay 1- Brazil si aadan u baahan tahay fiiso, kaliya ay baasaboorka. 2 - Lacagta Ruushka waa Rubeel, taas oo loo dhimay dhinaca xiriirka Real. Xilligan, 1 Real waxay u qalantaa qiyaasta 18. 3- Ka hadalka cashuurta, lacag caddaan ah oo ku jirta ATM-yada ...
Leia mais Maxay tahay inaan ogaado ka hor intaanan u safrin Ruushka? (Talooyin)